Kitty For Me: May 2008
No. Date Name Amount[Baht]
01 08-May-2008 Manlika Witayawinit 2,000
02 08-May-2008 Siripong Visasmongkolchai 500
03 08-May-2008 Suraphat Siri-Uphatham 1,000
04 08-May-2008 Than Than Myint 5,200
05 08-May-2008 Pyae Sone Mg 1,000
06 08-May-2008 Yee Mon Su Hlaing 6,000
07 09-May-2008 Peerapong Charoenpong 1,000
08 09-May-2008 Wilasinee Kamkanok 1,000
09 09-May-2008 Thaw Zin Latt 2,000
10 09-May-2008 Ye Yan Aung 1,000
11 09-May-2008 Nay Myo Lwin 1,000
12 09-May-2008 Thet Naung[Genex Company] 1,500
13 09-May-2008 Wong Yew Kai 500
14 09-May-2008 Pwint Phyu Kyaw 3,000
15 09-May-2008 Myo Nyunt Kyaw 1,500
16 09-May-2008 Chaw Yu Yu Win 300
17 09-May-2008 Thaw Tar Kyaw 300
18 09-May-2008 Twe Twe Toe 300
19 09-May-2008 Mg Mg Swe 100
20 10-May-2008 Min Thi Ha [Singapore] 1,000
21 10-May-2008 Aung Kyaw Soe 1,500
22 10-May-2008 Soe San Win 3,000
23 10-May-2008 U Sai Ohn Myint 2,000
24 10-May-2008 Nang Kham Monn 3,000
25 10-May-2008 Kyaw SiThu+Pont Pont 1,000
26 10-May-2008 Myo Han 1,000
27 11-May-2008 Than Zaw 500
28 11-May-2008 Nyein Thew Khine [Abac School] 5,000
29 12-May-2008 Hein Lwin 1,500
30 12-May-2008 Hlaing Myo Oo 500
31 12-May-2008 Khaipi 800
32 12-May-2008 Nyi Thway 1,000
33 -May-2008 Ko Sai Tip 5,820
A friend of ours was walking downadeserted Mexican beach at sunset. As he walked along, he began to see another man in the distance. As he grew nearer, he noticed that the local native kept leaning down, picking something up and throwing it out into the water. Time and again he kept hurling things out into the ocean. As our friend approached even closer, he noticed that the man was picking up starfish that had been washed up on the beach and, one atatime, he was throwing them back into the water.
ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လူသူရှင်းသော maxico ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ သူတွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ပြောပြသည်။
နေ၀င်ဆည်းဆာချိန် ကမ်းခြေမှာ သူတစ်ယောက်တည်းလျှောက်သွားတုန်းက ဟိုးအဝေးဆီမှာ လူတစ်ယောက် ကိုလှမ်းမြင်ရသည်။ နည်းနည်းနီးလာတော့ ဒေသခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိသည်။ သည်လူက ကမ်းခြေသောင်စပ်မှာ ကုန်းကုန်း ကုန်းကုန်းနှင့် သွားနေရာက တစ်စုံတစ်ရာကို ငုံ့ကောက်ကာ ပင်လယ် ရေထဲ လွှင့်ပစ်သည်။ သည့်နောက် အဲသည်လိုပဲ နည်းနည်းလျှောက်သွားလိုက် တစ်ခုခုတွေ့လျှင် ကောက်ယူ လိုက် လွှင့်ပစ်လိုက် လုပ်နေသည်။
ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေက သူ့အနားရောက်သွားပြီး သေသေချာချာကြည့်တော့ လှိုင်းနှင့်ပါလာပြီး သဲသောင် ပြင်ပေါ် တင်ကျန်နေသည့် ကြယ်ငါးတွေကို ရေထဲပြန်ပစ်ထည့်ပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိလိုက်ရသည်။
သည်လူ ဘာရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်နေသလဲ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ စဉ်းစားမရဖြစ်သွားသည်။ သို့နှင့် သူ့ကို နှုတ်ဆက်ပြီး တည့်တည့်ပင်မေးကြည့်သည်။
“မသိလို့ မေးပါရစေဗျာ ။ မိတ်ဆွေ ဘာလုပ်နေတာပါလိမ့်“
“ကြယ်ငါးတွေကို သမုဒ်ဒရာထဲ ပြန်ပို့ပေးနေတာလေ။ ခင်ဗျား မြင်တဲ့ အတိုင်းပဲ။ အခု ဒီရေကျချိန် သောင်ပြင် ပေါ်မှာ တင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေဟာ ရေတက်တဲ့အချိန်ရောက်အောင် အကြာကြီးစောင့်နေရမှာ။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ကြာရင် အောက်စီဂျင်ပြတ်ပြီးသေမှာပဲ။ “
“ဟုတ်ကဲ့ အဲဒါတော့ ကျွန်တော်လဲ သဘောပေါက်ပါတယ်။“ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေက ဆိုသည်။
“ဒါပေမယ့် ဒီကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှာ ကြယ်ငါးတွေ ထောင်ချီပြီး ရှိနေမှာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီကောင်တွေ အားလုံးကို ခင်ဗျားဘယ်လို လိုက်ကောက်မလဲ။ တစ်ယောက်ထဲ မနိုင်နိုင်ဘူးလေဗျာ။ ပြီးတော့ စဉ်းစားကြည့်၊ ဒီကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်လုံးဆိုရင် အခုလို သဲသောင်ပြင်ပေါင်းရာချီရှိမှာပေါ့။ ဒီသောင်စပ်တိုင်းမှာ ရှိနေမယ့် ကြယ်ငါးတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သူ့သဘာဝနဲ့သူ ဖြစ်နေတာ ခင်ဗျားတစ်ယောက်ကြောင့် ဘာတွေ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲ။ “
ဒေသခံလူက ပြုံးသည်။ နောက်ထပ် ကြယ်ငါးတစ်ကောင် ကောက်သည်။ ထို့နောက် ...
“တစ်ခြားကောင်တွေ အတွက် မထူးခြားပေမယ့် ဟောဒီ ကြယ်ငါးတစ်ကောင်အတွက်တော့ ထူးခြားသွားတာပေါ့ဗျာ။ “ ဟုဆိုကာ ပင်လယ်ထဲ လှမ်းပစ်ထည့်လိုက်လေသည်။
[မူရင်း။ ။Jack Canfield and Mark V. Hansen တို့၏ One At A Time]
ဖေမြင့် ရဲ့ နှလုံးသားစာအဟာရ ထဲမှာ အမှတ်ရဆုံး ၀တ်ထုတိုလေးကို ပြပါဆိုရင် အပေါ်က “တစ်ကြိမ်မှာ တစ်ခု“ ဆိုတာလေးကို ပြရမယ်ထင်တယ်။ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ဆုံလာတိုင်း အဲဒီ ကြယ်ငါးလေးတွေကို သတိရမိတယ်။ အားလုံးအတွက် တစ်ပြိုင်နက်ထဲ မကူညီနိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ကူညီလိုက်နိုင်တဲ့ တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကြောင့် တစ်ခုခုရသွား အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုရင် တော်တော်ဝမ်းသာစရာကောင်းမှာပဲ။
ရုံးကနေ အိမ်အပြန်မှာ ကားအရမ်းကြပ်တာကြောင့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ boat စီးဖြစ်တယ်။ boat စီးရင် ထိုင်ခုံ တစ်တန်းကို လူ ၆ ယောက်ကနေ ၇ ယောက်လောက်ထဆန့်တယ်။ ကမ်းကို ကပ်ခါနီးတိုင်းမှာ စပယ်ယာက နဲနဲတိုးပေးကြဖို့ လိုက်လိုက်ပြောတယ်။ တစ်ချို့ကလဲ တိုးပေးကြတယ်။ တစ်ချို့ကလဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေ ကြတယ်။ အဲလိုလူမျိုးတွေ မြင်ရင် တော်တော်အသဲယားတယ်။ ဘာလို့ အဲလိုလုပ်ကြသလဲ မသိဘူး။ ကိုယ်ကလဲ နဲနဲတိုး သူကလဲ နဲနဲလေးတိုးပေးလိုက်ရင် တစ်ယောက်စာလောက် နေရာထွက်လာမယ်။ အဲဒီတစ်ယောက်စာလောက်ဟာ ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ဝမ်းသာရမလဲ။ အိမ်ပြန်ရဖို့အတွက် နောက်ထပ် boat တစ်စီးစောင့်စရာမလိုတော့ဘူး။ နောက်ထပ်နောက်မကျတော့ဘူး။ လူတွေအများကြီးအတွက် မတတ်နိုင်ပေမယ့် တစ်နိုင်သလောက် တစ်ယောက်စာအတွက် ကူညီနိုင်တာပဲလေ။
အခုလဲ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ဒုတ်ခတွေရောက်နေတယ်။ များလွန်းလို့ မကူညီနိုင်ဘူးလို့ မထင်မိပါနဲ့။ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်တတ်နိုင်သရွေ့ ကူညီနိုင်တာပဲ။ “ဆင့်ပါးစပ်နှမ်းပက်“ “နှမ်းတစ်လုံးနဲ့ဆီမဖြစ်“ ပေမယ့် နှမ်းစိပေါင်းများစွာစုပြီး ဆီဖြစ်လာတာပဲလေ။ အားလုံးအတွက် မတတ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ကူညီလိုက်လို့ ရသွားတဲ့ သူတွေမှာ အကျိုးရှိနိုင်တာပဲမို့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် ကြယ်ငါးကောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။။။။။
img credit to : koboyz
About Nagis Cyclone Donation
ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အခုပဲ ကွန်တက်ရတယ်။ သူတို့တွေ ဒလ ဘက်မှာ ဆန်သွားလှူကြမလို့တဲ့။ ဒီသူငယ်ချင်းတွေက လှိုင်သာယာ မှာ မီးလောင်တုန်းကလဲ အင်တိုက်အားတိုက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြ သွားလှူပေး လုပ်အားပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ...။ အခုလဲ ရန်ကုန်ကို ပိုက်ဆံလှူချင်နေတာ ဘယ်သူနဲ့မှလဲ အဆက်အသွယ်မရ ဘယ်ကို လှူရမှန်း မသိဖြစ်နေတာ။ ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူတို့ ဒလ ဘက်ကိုသွားလှူနေတယ် လုပ်အားပေးနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်မှ ငါတို့လဲ လှူချင်တယ် ပိုက်ဆံလွှဲလိုက်မယ်ဆိုပြီး ၀မ်းသာအားရပြောလိုက်ရတယ်။
စင်္ကာပူက သူငယ်ချင်းတွေကတော့ မနက်ဖြန် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀၀၀ စပြီးလွှဲလိုက်မယ်လို့သိရတယ်။ ဒလ မြို့နယ်အတွက် ဆန်အိတ် ၂၅၀ လောက်ဝယ်ပြီး လှူမယ်လို့လဲ သိရတယ်။ အသေးစိတ်သိချင်ရင် ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
အခုဘန်ကောက်မှာတော့ ဘယ်သူတွေအလှူငွေလိုက်ကောက်နေလဲတော့ မသိဘူး။ လောလောဆယ်မှာတော့ ရည်မွန့်ဆီမှာ အလှူငွေတွေ စုနေတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကလဲ အားတက်သရော လှူမယ်ဆိုလို့ တော်တော်ဝမ်းသာသွားတယ်။ သူတို့ကလဲ သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ တစ်ဆင့် လိုက်ပြီး မေးပေးဦးမယ်တဲ့။
Raven Group နဲ့ HH4NG(Helping Hands4New Generation) က သူငယ်ချင်း NMA တို့ကို နောက်ထပ် ၃ ရက် (သို့) ၄ ရက် လောက်မှာပိုက်ဆံလွှဲပေးနိုင်မယ် ထင်တယ်။ အခုသူတို့ အဖွဲ့ထဲက တစ်ချို့က ဘိုကလေးဘက်ကို သွားနေကြပြီ။ ပြန်လာရင် ဓါတ်ပုံတွေရော သတင်းတွေရော တင်ပေးမယ်လို့ ပြောတယ်။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အဲလိုလိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို တကယ်ပဲ ချီးကျူးပါတယ်။
ဘန်ကောက်မှာ ထိုင်းမှာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းချင်တယ်ဆိုရင် အောက်က မေးလ်တွေကနေ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
Posted by Me at 9:04 AM4comments:
RIP - Kim Min Soo
RIP - Kim Min Soo [Monday Kiz]
တကယ်ကို စိတ်မကောင်းဘူး။ မျှော်လင့်မထားဘူး။ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ Bye Bye Bye သီချင်းလေးကို အခုချိန်မှာ နားထောင်နေမိတယ်။ တကယ်ပဲ Bye Bye Bye ပါပဲလား။
မနေ့ညက မုန်တိုင်းကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ကြီးအကြောင်းကြားရတာ အရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ မနေ့ည ၁၀ နာရီလောက်ထိ အိမ်ကိုဖုန်းဆက်လို့ရနေသေးတယ်။ ဒီနေ့မနက်ဆက်တော့ မရတော့ဘူး။ လိုင်းဖုန်းလဲမရ ဟန်းဖုန်းလဲမရ။ နောက်တော့မှ ကွန်ဒိုဖုန်းကို သတိရပြီး ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ ၀င်သွားတယ်။ ဒီနေ့ မေမေတို့က အပြင်ထွက်လိုက်သေးတယ်တဲ့။ တစ်မြို့လုံး မှတ်တောင် မမှတ်မိလောက်အောင် ဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ ဆိုင်းဘုတ်တွေဆို တစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။ တစ်ချို့လမ်းတွေဆို သွားနေရင်းနဲ့ ဘယ်လမ်းရောက်နေပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့တောင်ဖြစ်ရတယ် လို့ပြောတယ်။ တော်တော်ကို ပျက်စီးကုန်ပြီနဲ့တူတယ်။ စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူး။ အခြေမခိုင် ယိုင်နဲ့နဲ့ နဲ့ဆင်ခြေဖုံးက အိမ်လေးတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်။ ကူမယ့် ကယ်မယ့်သူလဲမရှိ။ တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့ မုန်တိုင်းပါလား။ နောက်ထပ်ဆက်တိုက်ဦးမှာလား မသိဘူး။